မိုဘိုင်းကာစီနိုဒေါင်းလုပ် | တိုက်ရိုက်ကာစီနို| £ 200 စေရန် Up ကိုအပိုဆု! |
နေအိမ် » မိုဘိုင်းကာစီနိုဒေါင်းလုပ် | တိုက်ရိုက်ကာစီနို| £ 200 စေရန် Up ကိုအပိုဆု!
မိုဘိုင်းကာစီနိုဒေါင်းလုပ်နှင့်အတူတိုက်ရိုက်ကာစီနိုကိုစမ်းသပ်ဖို့ရှေ့ကိုဖွင့်မယ့်အဆင့် – £ 200 စေရန် Up ကိုအပိုဆုမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်!
လှည့်ဖျား Genie-Mobile အွန်လိုင်းမိုဘိုင်းကာစီနိုကို Download လုပ်ပြီးတော့တိုက်ရိုက်နဲ့အတူ Play, ဂိမ်းများ၏အကောင်းဆုံးအရောင်းသွက်ရှိပါတယ်မိုဘိုင်းလောင်းကစားခြင်း၏ကမ္ဘာ့ဖလားခုနှစ်တွင်ဖြစ်ကြသည်နှင့်အဒါ့အပြင်ရှာမည် £ 200 စေရန် Up ကိုအပိုဆု!
လက်ငင်း get, ထိုအတူအဆုံးမဲ့လောင်းကစားဝိုင်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာ မိုဘိုင်းကာစီနိုဒေါင်းလုပ် ဂိမ်း. အဆိုပါမိုဘိုင်း app သင်သည် resolution မြင့်မားတဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားဂိမ်း၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကမ်းလှမ်း, အချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက်ဂိမ်းလျှက်ရှိကြောင်းသငျသညျကိုစောင့်ရှောက်ရန်. ဆွဲဆောင်မှုပေးချေမှု option ကိုသင့်ရဲ့လက်ကိုင်ကိရိယာပေါ်တွင် app ကိုအတော်လေးလူကြိုက်များစေပါ.
ဒီဂိမ်းကိုသင့်ဖုန်းရဲ့သတ်မှတ်ချက်မှလက်ျာဘက်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်, app ကိုအွန်လိုင်းမှစျေးကွက်အတွင်းမှဦးခေါင်းနှင့် install, သင်က download လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြီးနောက်. app ကိုမိုဘိုင်းဈေးကွက်မှာ download ပြုလုပ်မရရှိနိုင်ရင်တောင်, သငျသညျဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေဒါလုပျနိုငျ.
Play မှတစ်ဦး customisible ကာစီနိုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအဘို့အ Register – အခမဲ့ Up ကို Sign
ထိုရက်သတ္တပတ်၏အဆုံးမှာနောက်ထပ်အပိုဆု Get-£ 100 ကိုအခမဲ့တောင်းဆို!
သင်သည်သင်၏ဖုန်းတွင် download လုပ်မိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံ apps တွေရှိပါတယ်ပြီးနောက်သင်ချက်ချင်းကစားရသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသေးစိတ်ကိုနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ရန်ရန်လိုအပ်ပါတယ်. အဆိုပါမှတ်ပုံတင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဟာအလွန်ရိုးရှင်းနှင့်သင်တို့လယ်အချို့ကိုဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်လောင်းကစားများ၏လမ်းကြောင်းကိုအပေါ်ဆက်လက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်. သင်လည်းသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ဖို့အွန်လိုင်းဘဏ်အကောင့်သို့လင့်ထားသည်နိုင်မှတ်ပုံတင်ရန်ပြီးနောက်, သငျသညျကိုမှန်ကန်ပိုက်ဆံဂိမ်းကစားရန်မျှော်လင့်နေကြသည်လျှင်.
3D Graphics နှင့်အတူလောင်းကစားများ၏စိတ်လှုပ်ရှားစရာခံစားရပါ
ဂိမ်းရဲ့အံ့သြဖွယ် 3D ဂရပ်ဖစ်အတော်လေးကြီးကျယ်ခမ်းနားဖြစ်ပါသည်, တစ်ဦးလျှော့မလောင်းကစားရုံအတှေ့အကွုံသေချာ. အဆိုပါ display ကိုသင့်ရဲ့ဖုန်း screen ကိုအရွယ်အစားချိန်ညှိသည်; သင်တစ်ဦးက iPad ကိုအသုံးပြုနေလျှင်ဒီတော့သင်ကအပြည့်အဝငျလှာ display ကိုအရည်အသွေးအပျြောမှေ့ပါလိမ့်မယ်. သင့်အနေဖြင့်မိုဘိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံအပေါ်ဂိမ်းတစ်ခုအကွာအဝေးကနေရှေးခယျြနိုငျ. အဆိုပါဂိမ်းထဲမှာရရှိနိုင်ပါ
£ 200 အထိတစ်ဦးမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်အပိုဆု Get
အဆိုပါမိုဘိုင်းလောင်းကစားဝိုင်း app များကိုသာသင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းဆုလာဘ်တစ်ခုအကွာအဝေးရှိသည်. အဖြစ်မကြာမီသင်သည်သင်၏ပထမဦးဆုံးအပ်ငွေအတွက်ထားအဖြစ်, အလောင်းကစားရုံဆုလာဘ်များနှင့်သိုက်ဆုကြေးငွေများနှင့်ကြိုဆိုဆုကြေးငွေများကဲ့သို့အပိုဆုကြေးငွေအားဖြင့်သင်တို့ကိုကြိုဆို. တစ်ဦးကမျှသိုက်ဆုကြေးငွေလည်းသင့်အားပေးအပ်ချီးမြှင့်သည်, မည်သည့်သိုက်ငွေပမာဏ၏လိုအပ်ချက်မပါဘဲ. သငျသညျကျယ်ကျယ်ရှိသမျှကိုလောင်းကစားရုံဂိမ်းမှာကစားရန်အသုံးပွုနိုငျရသောအပိုဆောင်းအခမဲ့လောင်းကစားရုံပိုက်ဆံ, သို့သော်ဤအပမာဏမဆိုအွန်လိုင်းအကောင့်မှဆုတ်ခွာသို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းခံရဖို့မရှိပါ, သူတို့ကမဖွစျနိုငျ.
သာလည် Genie မှာရန်ပုံငွေရှာခြင်းလွယ်ကူခြင်းနှင့်လုံခြုံတဲ့
အကြီးဆုံးအွန်လိုင်းအဘိဓါန်လောင်းကစားဂိမ်းများကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ဒါကြောင့်လွယ်ကူခဲ့ဖူး; စတင်ရန်အွန်လိုင်းဘဏ်စနစ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအကွာအဝေးကနေရှေးခယျြ. သငျသညျခရက်ဒစ်ကတ်များနှင့်တူမည်သည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းရှေးခယျြနိုငျ, ဒက်ဘစ်ကဒ်သို့မဟုတ်မည်သည့်အွန်လိုင်းဘဏ်စနစ်နည်းလမ်းများ. NETeller သို့မဟုတ် Skrill တူသောအွန်လိုင်းဘဏ်စနစ်န်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်း, လျင်မြန်စွာသင်ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်း၏လွတ်လပ်ခွင့်ပေးသည်, သင့်ရဲ့လောင်းကစားဝိုင်းပရိုဖိုင်းကိုအစာကျွေးဖို့. မိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံ download, ဂိမ်းပေါ်တွင်သင်၏အလောင်းအစား Place နှင့်ပျော်စရာလမ်းဝင်ငွေရ!
မိုဘိုင်းကာစီနို Play ရန် Download ထိုအခါဦးဝင်းငွေထိုအခါအခမဲ့အပိုဆု, မှာပိုတောင်မှရှာမည် မိုဘိုင်းများအတွက် Genie လည်